.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Wedding Album Maker Gold
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတော့ မင်္ဂလာဆောင်ကြတဲ့လူတွေ များနေလောက်ပြီ ထင်တာပဲ။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက စုံတွဲပုံတွေ ၊
အချစ်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပုံလေးတွေ ၊ မင်္ဂလာဆောင်မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ အစုံ ပြင်ဖို့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလ်က မူရင်းဆိုဒ်မှာဆို ရောင်းတာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ ဖရီးကို Full Version သုံးလို့ရအောင် ကီးထည့်ပြီးတော့
Portable လေး လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ အသုံးပြုနည်း Screenshot တွေကိုတော့ ဒီနေရာလေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့...။
Posted by Thurainlin at 06:17